युवाहरुको जोस, अग्रजहरुको सोच ! गर्दै हातेमालो सभ्य समाजको खोज::KhojOnline.com
“युवाहरुको जोस, अग्रज हरुको सोच ! गर्दै हातेमालो सभ्य समाजको खोज”भन्ने नारा संगै तमानखोला दलित मञ्च काठमाण्डौंको युवा भेला ठुलो जमातको उपस्थितीमा सम्पन्न भएको छ । तमानखोला गाँउपालीका घर भै हाल काठमाण्डौंमा बस्दै आएका दलित समुदायका युवाले आफ्नो संस्था स्थापनाको प्रारम्भमा आज एक युवा पक्ष बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । साविक का बोगांदोभान, तमान र खुंखानी गा.बि.स. का युवाहरुको उपस्थिती रहेको उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आम तमानखोला बासि दलित समुदायलाई शिक्षित र चेतनशील बनाउने रहेको आयोजक ले बताएको छ । कार्यक्रमा उपस्थित युवाहरुले समाज परिर्वतनमा आफुहरुको ठुलो भुमिका रहेको भन्दै आफुहरु आफ्नो समुदायको चेतनास्तर बृद्धि गर्न सधै लागी पर्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।
झण्डै ४५ जना युवाहरुको उपस्थिती रहेको उक्त कार्यक्रमले आगामी चैत्र २ गते शनिवार बृहत कार्यक्रम गरि आफ्नो संस्था स्थापना घोषणा गर्ने जानकारि दिएको छ। जस्को लागी संस्थाले कार्य बिभाजन तथा उक्त कामको लागि ब्यक्ति चयन गरेको छ जुन निम्नानुसार छ ।
आगामि कार्यक्रम निर्माण ब्यबस्थापन समिति
टिम संयोजक नर कुमार गोतामे
र्कायक्रम ब्यबस्थापन समिति
संयोजक ः लवन श्रीपाली
सल्लाहकार समिति संयोजक ः ईन्द्रमान श्रीपाली
टेक प्रसाद श्रीपाली
अन प्रसाद रसाईली
साथै संस्थाले रचनात्कम काम गरेको भन्दै युवाहरुले चार हजार भन्दा माथी आर्थिक संकलन गरेका छन, अत्यन्तै रचनात्मक शैलीमा देखिएको यस संस्थाको नेतृत्व संस्थाका सदस्य जसिन्द्र श्रीपाली ले गरेका छन ।